म्यानपावरको धरौटी ६ करोड पुर्‍याउने प्रस्ताव संसद्‍मा पुग्यो — sancharkendra.com
म्यानपावरको धरौटी ६ करोड पुर्‍याउने प्रस्ताव संसद्‍मा पुग्यो
काठमाडौं । सरकारले म्यानपावर व्यवसायीको धरौटी रकम बढाउने तयारी गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा ठगी बढेको र व्यवसायी जिम्मेवार हुन नसकेको भन्दै सरकारले धरौटी रकम बढाएर ६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्ताव संसद्मा लगेको हो। अहिले उक्त धरौटी रकम ३० लाख छ।
संघीय संसद्ले केही नेपाल कानुन पारित गरेमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ। धरौटी बढेमा बिचल्लीमा परेका कामदार उद्धार गर्न, क्षतिपूर्ति भराउन सजिलो हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ। केही महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरले एक करोड रुपैयाँ नगद धरौटी र दुई करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ। पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरले दुई करोड नगद र चार करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने छ।
अहिलेको प्रावधानअनुसार म्यानपावर व्यवसायीले सात लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी राख्ने व्यवस्था छ। दर्ता भएका करिब १४ सय म्यानपावरमध्ये एक/दुईवटाले मात्रै पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउन सकेका छन्। अधिकांश कामदारले पाँच हजारभन्दा कम कामदार मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाइरहेका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने दि ओभरसिज र कोसी इन्टरनेसनल मात्र छन्। अरु सबैले पाँच हजारभन्दा कम नै कामदार पठाइरहेका छन्। कामदार पठाउने प्रवृति हेर्दा अधिकांश म्यानपावरले एक करोड नगद र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारले सबै म्यानपावरलाई दुई करोड नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टीको प्रस्ताव गरे पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त व्यवस्था परिवर्तन गरेको थियो।
धरौटी बढाउने प्रस्ताव पारित भएमा अहिले अस्तित्वमा रहेका अधिकांश म्यानपावर बन्द हुन सक्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बताउँछन्। केही म्यानपावर सञ्चालनमा समस्या भए पनि यसले वैदेशिक रोजगारमा थप सुधार हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार धरौटी रकमले कामदारको सुरक्षामा सजिलो हुने बताए। ‘अब म्यनपावर व्यवसायी जिम्मेवार हुनेछन्, ‘उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा ठगी पनि रोकिनेछ।’
मर्जमा जान दबाब
म्यानपावरको धरौटी बढाउने प्रस्तावले म्यानपावर व्यवसाय बन्द गर्न या मर्ज गर्न दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको व्यवसायी बताउँछन्। धरौटी बढाउने प्रस्ताव संसद्ले पारित गरे सरकारले म्यानपावर कम्पनी मर्जका लागि कार्यविधि बनाउनेछ। धरौटी बढ्ने प्रस्ताव पारित भए म्यानपावर कम्पनी आपसमा मर्ज हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले बताए।
‘धेरै म्यानपावर भएर ठगी बढ्यो, नियमन गर्न सकिएन’, उनले भने। सहसचिव दाहालका अनुसार कारबाही गर्नुपर्दा म्यानपावरको धरौटी रकमबाट गर्न सकिन्छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सुवर्ण श्रेष्ठले भने म्यानपावर वर्गीकरणले समस्या ल्याउने बताइन्।
उजुरी जिल्ला प्रशासनबाटै
वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगी अब सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिन सक्नेछन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट नै उजुरीमाथि फरफारक हुनेछ। इजाजतपत्र प्राप्त संस्था उपर उजुरी परेकोमा सात दिनभित्र उजुरी विभागमा पठाउनुपर्नेछ। तर, कुनै व्यक्ति उपर परेको रहेछ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट छानबिन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट
२०७५ पुष १४ गते प्रकाशित
कान्तिपुरका पत्रकारको रूवाबासी, मिडिया हाउसविरुद्ध एक्सनमा उत्रिने महासंघको तयारी
अर्थमन्त्रीको पावरमा विकास बैंकका अध्यक्ष कोइराला बर्खास्त, अग्रवालले पाए चान्स
बलात्कार काण्डका मुख्य नाईके बल्ल परे पक्राउ, सिधै कारागार चलान
एकताको बिषयलाई लिएर नेकपापा भित्र लफडा, ओली-प्रचण्ड तनावमा
प्रधानमन्त्रीको जिल्लामै घट्यो निर्मला प्रकरण भाग–२, कोकको बोतलमा रक्सी मिसाए बलात्कार
वाईसीएलका नेतामाथि प्रहरीकाे इन्काउन्टर, खुल्यो यस्तो रहस्य
काठमाडौं । प्रहरीले गोंगबुस्थित एक होटलमा हतियार कारोबारी भनेर गोली हानेका व्यक्ति वाईसीएल काभ्रेका नेता...
उपत्यकासहित देशभरि सिमसिम वर्षा- कतै हिमपात त कतै चट्याङ, दुईको मृत्यु ,चार घाइते
काठमाडौं । उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा बुधबार बिहानदेखि नै वर्षा भैरहेको छ । पश्चिमी वायुको...
यौनकर्मीको आत्मकथा- ग्राहक सांसद, पुलिस र आर्मी, एक जना भनेर तीन जना आउँदा नमज्जा लाग्यो
काठमाडौं । रातोपुलको एउटा क्याफेमा सेतो पेन्ट, कालो र नीलो छिर्केमिर्के टिसर्टमा आइपुगिन् उनी ।...
नेकपाले सिमानामा लगायो काँडेतार, सिंहदरवारदेखि दिल्लीसम्म हलचल
काठमाडौँ । अखिल क्रान्तिकारीले नेपाल–भारत सीमानामा काँडेतार लगाउने अभियान सुरु गरेको छ । क्रान्तिकारीले भारतले...
काठमाडौंपछि भोजपुर केन्द्रबिन्दु बनाएर मध्यरातमा भूकम्प, कस्तो छ क्षतिको अवस्था ?
काठमाडाैं । प्रदेश नम्बर एकको पहाडी जिल्लाहरूमा मंगलबार राति भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ ।...
नेकपा महासचिव विप्लव कहाँ छन ? ओली सरकारलाई काउन्टर दिन यस्तो बनाउदैछन योजना
तेस्रो बिहे गरेका रविलाई अमेरिकाबाट पूर्वपत्नी र छोरीहरुले यसो भने
कारबाहीमा पर्ने निश्चित भएपछि मन्त्री अधिकारीले मुख खोले, दिए सबैलाई चकित पार्ने स्पष्टीकरण
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहानैदेखि सबै उडान ठप्प, यस्तो छ कारण
चितवनमा घट्यो डरलाग्दो बलात्कार काण्ड, १६ बर्षीया किशोरी बलात्कृत, अर्की बालिका घाइते
सकियो नेकपाको स्थायी समिति बैठक, ओली सरकारलाई काउन्टर दिन के-के भए निर्णयहरु ?
बम्जनको आश्रममा प्रहरीको छापा, उनका कर्तुतबारे खुल्यो अर्को खतरनाक रहस्य
बैद्य माओवादीको कारवाहीमा परेपछि सुगतरत्न कंसाकारले दिए यस्तो सनसनीपूर्ण प्रतिक्रिया
बाबुराम भट्टराईका ४ ट्वीटले सामाजिक सञ्जालमा खैलाबैला, ओली प्रचण्ड बने बेजवाफ
स्वास्थ्य मन्त्रीकै कार्यकक्षमा बित्छ पुष्पाको समय, आखिर दिनभर के हुन्छ गोप्य कोठाभित्र ?